MM Abiy Ahimad: Itoophiyaan yoo jiraatte amma raayyaa iitisa biyyaa keessa jirti - BBC News Afaan Oromoo
Marii hooggantootaa Ertiraa fi Somaaliyaa waliin godhamuuf akkasumas marii hawaasaa gaggeessuuf Gondar kan jiran Ministirri Muummee Abiyy Ahimad, rifoormiiwwan ji'oota torba darban biyyattii keessatti gaggeeffaman keessa kan akka raayyaa ittisa biyyaa keessatti milkaa'ee hin jiru jedhan.
Magaalaa Gondaritti miseensota hawaasaa garaagaraa waliin kaleessa kan mariyatan Ministirri muummee, raayyaa ittisa biyyaa keessatti olaantummaan saba tokkoo jiraachuurratti gaaffii ka'eef deebii kennaniiru.
Imala loltootaa gara masaraa mootummaa 'push up'n xumurame
''Waanta jijjiirama jedhamu, kan lafa qabate fidneerra jennee laphee keenya dhiibnee kan dubbannu raayyaa ittisa biyyaa keessatti waan hojjennedha.''
Raayyaan ittisaa dameewwan qilleensaa, lafoo fi galaanarraa biyyattii gahuumsi ittisaa qabu laafaa ture, jedhan Ministirri Mummee Abiyy.
''Saayberiinis, ispeesiinis gahuumsa ittiisuu danda'u ijaaruu qabna jennee labsiidhaan seera baasnee ministira qofa osoo hin taane, ergamasaas qaamni jijjiire raayyaa ittisaati.''
Caaseffama amma ijaaran keessattis olaantummaan saba tokkoo akka hin jiraannee hojjechuu isaanii dubbataniiru.
''Ajajoota (Izziiwwan) qabnu keessaa tokkoonsaa keessattuu saba tokkorraa namni lama hin jiru. Sabaafii sablammii hundarraa walitti qabnee hundeessine.''
Dhimmoota 10 ministira muummee haaraa irraa eegaman
Karra galaana malee humna galaanaa qabaachuu...?
Kana dura raayyaan ittisa biyyaa kan komatamaa ture, sadarkaa hooggansaatti malee sadarkaa godaatti mitii kan jedhan Dr. Abiy, ''Izzii jalqabee hanga kutaa waraannaatti caaseffama jiru keessatti yeroo duraatiif Amaarris, Oromoonis, Tigireenis sabaafi sablammiin biroos koree ta'ee kan itti hojjetu jijjiiramni guddaan kan keessatti dhufeedha,'' jedhan.
Raayyaan ittisa biyyaa, Itoophiyaa waan fakkaachuu qabduuf, hirmaannaa sabaaf sablammootaa walmadaalchisuuf hojii hojjetame keessatti sabni hedduu qabu wal hubannaan hojii kanaaf dabarsanii of kennaniirus jedhan.
Yeroo hedduu fudhate hojiin bareedee hojjetame, bu'aan isaa oolee bulee mula'ata jechuunis dubbatan.
Raayyaan ittisa biyyaa dhaaba mootummaadhaaf ifa, diinaaf ammoo dhokataa ta'eedha. Sababni isaammoo hojiin isaa daangaa biyyaa eeguu waan ta'eefi jedhan.
Raayyaan ittisa biyyaa waraanni akka hin dhalannee qaama dursee fashalsuus malee yeroo hundumaa waraanee kan injifatu miti jechuunis dubbataniiru.
Kana gochuuf ammoo caaseffamni isaa, hidhannoo fi sooratni isaa beekamuu hin qabu jedhan.
''Dhugaa nutti himi yoo jettan biyyi Itoophiyaa jedhamtu isheen dhumaa kan jirtu raayyaa ittisa biyyaa keessatti.''
Haala nageenyaa biyyattii keessa jirurraa yaaddoo qabaachuu isaaniis Dr. Abiyyi waltajjii bakka buutotni dargaggootaa fi kutaalee hawaasa garaagaraa argaman kanarratti dubbataniiru.
''Uummatni Itoophiyaa kaan waayee gandaa fi maatii isaa qofa yaadaa oola.''
''Itoophiyaan biyya gaddisiistuu abbaa dhabdeedha. Itoophiyaan yoo jiraatte amma raayyaa iitisa biyyaa keessa jirti,'' jedhan.
Iddoo biraa akkuma argaa jirtan gosa koo yoo ta'uu baatte naa bahii jedhamaa jira malee, ati lammii Itoophiyaati sii mala jiraadhuu mitiis jedhan.
"Karoora Liyyuu poolisii naannoo Somaalee hiikkachiisuu hin qabnu" - Ministeera Ittisa Biyyaa
Karra galaana malee attamiin humna galaanaa qabaachuun ni ta'aa?
'Waldhabdee taa'umsaa xiyyaara keessatti uumameen Waayit Haawus keessaa ari'amte'